Karatra fampindramam-bola amin'ny back Cash - World Trade Exchange
Mahazoa vola 95% Averina amin'ny fividianana orinasa rehetra
Azonao atao ny mahazo 95% cashback isaky ny fividianana ataonao amin'ny fampiasana ny 'Cash Back Business Credit Card.'
Ny 'Cash Back Business Credit Card' dia manome fomba iray ahazoana vola 95% tsy voafetra ho an'ny orinasanao amin'ny fividianana matetika na amin'ny fiantsenana efa nataonao, na aiza na aiza, tsy misy fetra na fetra sokajy.
Azo antoka 100% ianao hahazo 95% cashback isaky ny fividianana na fampiasam-bola ataonao amin'ny alàlan'ny 'Cash Back Business Credit Card' amin'ny alàlan'ny WTE.
Tsy misy fetra amin'ny sokajy vokatra sy serivisy
Azonao atao ny mividy izay fananana, vokatra, serivisy ary famatsiana avy amina orinasa an-tapitrisany ary mahazo 95% cashback isaky ny fividianana ataonao.
Ohatra, raha mividy trano ianao anio miaraka amin'ny 'Carte de crédit Back Cash', ianao dia ho miverena 95% amin'ny fandanianao. Raha mividy orinasa, orinasa mpamokatra entana ianao, akora ilaina, milina, fitaovana, fananana rehetra, fotodrafitrasa famokarana, na vokatra sy serivisy hafa ankehitriny 'Carte de crédit Back Cash', ianao dia ho miverena 95% amin'ny fandanianao.
KATEGORIA Vokatra sy serivisy azonao vidiana
Ny 'Cash Back Business Credit Card' dia manome valisoa anao amin'ny fiantsenana efa nataonao, na manao ahoana na manao azy. Rehefa mandany vola ianao hividianana toeram-pamokarana vaovao (milina, fitaovana, teknolojia, orinasa mpamokatra entana iray manontolo, fitrandrahana, ozinina fanodinam-bokotra sns.) Na vokatra na serivisy hafa dia miverina aminao ny 95% amin'ny vola laninao. 'cashback, fandrisihana ho an'ny “fiantsenana efa nataonao.”
Mahazo vola mitovy valiny (95%) amin'ny varotra rehetra ataonao matetika ianao, na aiza na aiza no miantsena, tsy misy fetra ary tsy manahy momba ny sokajy orinasa.
Mahazoa vola 95% tsy voafetra ho an'ny orinasanao isaky ny fividianana, na aiza na aiza, tsy misy fetra na fetra sokajy.
tombony amin'ny carte de crédit Cash Back Business '
Tombontsoa tsy voafetra
95% Cash miverina amin'ny fividianana orinasa tsy voafetra: Azonao atao ny mahazo vola 95% tsy voafetra ho an'ny orinasanao isaky ny mividy, na aiza na aiza, tsy misy fetra na fetra sokajy.
Tsy voafetra ny fandaniana: Afaka mahazo vola sandoka tsy voafetra ianao, ary tsy ho lany daty io raha mbola misokatra sy milamina ny kaontinao.
Tsy misy fetra amin'ny sokajy vokatra na serivisy: Tsy misy fetra ny sokajin'ny vokatra sy serivisy azonao vidiana amin'ny fampiasana ny carte cashback B2B. Mahazo vola mitovy valiny (95%) amin'ny vidin'ny varotra ataonao matetika ianao, na aiza na aiza no ivarotanao (via WTE), tsy misy fetra, ary tsy manahy momba ny sokajy orinasa.
Mandany ambonin'ilay fetranao tsy misy sarany mihoatra ny fetra: Ankafizo ny fahalalahana mividy mihoatra ny fetran'ny trosanao ary mahazo valim-bola 95% tsy misy fetra tsy misy manahirana ary tsy misy sarany mihoatra ny fetra.
Tsy misy fahataperana: Mahazoa valim-bola amin'ny vola rehetra amin'ny fotoana rehetra ary tsy misy daty lany daty amin'ny ain'ny kaonty. Ny loka dia tsy tapitra mandritra ny androm-piainan'ny kaonty, ary azonao atao ny manavotra ny vola naverina amin'ny vola na hamindra izany amin'ny kaonty any amin'ny banky rehetra.
Tsy misy fiampangana zanabola. Tsy misy antoka. Tsy misy sarany indram-bola. Tsy misy fanamarinana bola. Tsy misy enta-mavesatra trosa.
PAYOUT INDRINDRA. TSY MISY VIDINA miafina
7. Avoty ny vola azo amin'ny alàlan'ny fametrahana mivantana amin'ny kaonty banky: Azonao atao ny mamindra ny sandam-bola feno amin'ny cashback anao any amin'ny kaontinao any amin'ny banky na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Azonao atao ny manavotra ny sandam-bola amin'ny fomba toy izao, amin'ny fotoana rehetra.
8. Aloavy izay ilainao: Ny fanesorana ny valisoa vola azo avy aminao dia mora, ary azonao atao amin'ny fomba maherin'ny 60 isan-karazany ao amin'ny kaontinao. Alao mivantana any amin'ny kaontinao ny volanao.
9. 0% zanabola: Ny fividiananao rehetra dia natao zanabola zéro isan-jato.
10. Tsy misy sarany amin'ny fifanakalozana ivelany: Mitsangatsangana ivelan'ny firenena? Mividy zavatra amin'ny vola vahiny? Azonao atao ny mividy entana na serivisy any amin'ny firenena vahiny nefa tsy misy sarany amin'ny fifanakalozana ivelany.
11. $ 0 sarany isan-taona ho an'ny taona voalohany; 295 $ aorian'izany.
12. Fiarovana amin'ny fividianana: Ny fividianana azo ekena dia takona mandritra ny 120 andro manohitra ny fahasimbana, ny halatra, na ny "fisarahana an-tsitrapo sy tsy nahy tamin'ny trano." Hatramin'ny $ 100M isaky ny fitakiana dia misy, ary hatramin'ny $ 50M isaky ny kaonty.
13. Fiarovana amin'ny Warranty maharitra: Ireo entana azo ekena miaraka amin'ny antoka telo taona na latsaka dia afaka manitatra ireo karama ireo amin'ny taona fanampiny. Hatramin'ny $ 100M farafahakeliny dia azo isaky ny fangatahana sy $ 50M isaky ny kaonty.
14. Fiarovana amin'ny hosoka sy ny andraikitra: Fanaraha-maso hosoka amin'ny fotoana tena izy ho an'ny hetsika tsy nahazoana alàlana. Tsy ho tompon'andraikitra amin'ny hetsika tsy nahazoana alalana amin'ny kaontinao ianao.
15. Fanodinana fahasimbana amin'ny fifanenjehana fiara-miasa: Ny fiaran'ny fiakaranao mendrika dia voarohirohy amin'ny fangalarana sy ny fahasimbana, raha mbola mandà ny fiantoham-pon'ny orinasa manokana ianao. Tsy maintsy mandoa ny hofan-trano rehetra ianao amin'ny fampiasana ny 'Cash Back Business Credit Card'.
16. Fiarovana amin'ny fivarotana sy fitsangatsanganana: Fiarovana amin'ny fividianana, Warranty mitatra, famerenam-bola fanemorana ny dia, fiantohana fiatoana / fiatoana fiantohana, fiantohana fanemorana entana, fahaverezan'ny valizy very, fiantohana lozam-pifamoivoizana.
Fitsaboana VIP eran'izao tontolo izao
17. Fialana voly: Antsoina koa hoe Membership Experience, dia manome tapakila alohan'ny varotra isan-karazany amin'ny fanatanjahan-tena, mozika ary hetsika ara-kolontsaina, ary koa ny fidirana amin'ny traikefa manokana.
18. Serivisy fanampiana vonjy taitra sy fanampiana vonjy taitra: Antsoy ny laharana ao ambadiky ny karanao raha mila fanampiana vonjy maika amin'ny karazany maro ianao mandritra ny dia. Ny sarany amin'ny antoko fahatelo dia hampiharina amin'ny serivisy rehetra azo.
19. Priority Pass Select mpikambana: Ny maha-mpikambana dia misy fidirana amin'ireo efitrano fitsaharana maherin'ny 1,000 manerana an'izao tontolo izao miampy safidy fisakafoanana. Afaka miditra maimaimpoana ny tompon-karatra sy ny vahiny roa.
20. Fanangonana hotely sy hotely mihaja: Manome serivisy maimaimpoana sy tombontsoa amin'ny trano fandraisam-bahiny sy hotely mandray anjara, ao anatin'izany ny fanavaozana ny efitrano, sakafo maraina isan'andro ho an'ny roa, ary fanomezana manokana
Fandraisana sy fanohanana tsy voafetra
21. fidirana amin'ny kaonty an-tserasera 24/7: Tantano ny kaontinao an-tserasera hahazoana fampandrenesana momba ny asan'ny kaonty, jereo ny safidio fandoavam-bola, sintomy ny fanambarana ny kaonty taloha, sy ny maro hafa.
22. Fanohanana ho an'ny mpanjifa 24/7: WTE ny solontena dia voaofana manokana hiara-hiasa amin'ireo tompona orinasa ary vonona hamaly ny fanontanianao rehetra.
23. Karatra mpiasa maimaimpoana 100: Omeo fomba mora fandaniana ny mpiasanao mba hahazoanao vola 95% amin'ny fividianana rehetra. Azonao atao ny mahazo karatra mpiasa hatramin'ny 100, maimaim-poana izany rehetra izany ary mamaritra fetra fandaniana ho azy ireo manokana. Raha mila karatra mpiasa bebe kokoa ianao dia mety afaka mangataka kaonty misaraka.
24. Fandraisana ny mpiasa: Araho ny fandaniam-bolan'ny mpiasa mandritra ny fahazoana ny valisoa rehetra amin'ny fividianany. Mametraha fetra fandanjana manokana ho an'ny karatry ny mpiasa ary jereo ny fifanakalozana raha vantany vao mandefa izy ireo. Manendre mpitantana kaonty hanao fividianana sy fandoavam-bola, handinika ny fifanakalozana ary hamaha ny olana rehetra.
25. Concierge 'Card Credit Business Credit': Miantso fanampiana isan-karazany amin'ny fanampiana vonjy taitra, toy ny fanaovana famandrihana fisakafoanana sy ny fitadiavana mombamomba ny dia momba izany.
26. Miantsena amin'ny alàlan'ny WTE sehatra: Mitadiava mpivarotra mpiara-miasa aminao izay ahafahanao mahazo cashback bebe kokoa.
STEP 1: MIARAHA WTE.
Join ny WTE maha-mpikambana anao ary atsangano ny kaontinao.
STEP 2: MANAO Fividianana entana.
Manaova fividianana sy fampiasam-bola toy ny mahazatra ary mahazoa vola 95%.
STEP 3. HANDOA.
Avereno aloa ny vola azonao tamin'ny alàlan'ny famindrana banky. Makà valiny tena izy. Hahazo vola 95% ianao raha vantany vao voamarina ny kaomandinao. Tsy misy isa, tsy misy tapakila, tsy misy mari-barotra… vola fotsiny!
Tsy miandry ny fanamarinana amin'ny mail intsony. Tonga ao amin'ny kaontinao any amin'ny 24 ka hatramin'ny 72 ora ny famindram-bola any aminao.
NY FOMBA ANANANTSIKA ANAO.
Rehefa manao fividianana sy fampiasam-bola amin'ny alàlan'ny WTE, WTE dia hanampy anao hiteraka fidiram-bola vaovao hividianana ny fandanianao. Avy eo, havoakanay ny 95% amin'ny vola azo avy amin'ny kaontinao amin'ny banky ho valisoa cashback. Azo antoka 100% ny valisoa cashback anao satria WTE dia hanao 100% ny asa takiana mba hiteraka fidiram-bola amin'ny anaranao!
Ohatra, raha mividy $ 100,000 ianao dia hiverina 95% amin'ny $ 100,000, izay $ 95K amin'ny endrika fidiram-bola vaovao amin'ny alàlan'ny WTE. WTE dia hanampy anao hamokatra $ 100K amin'ny vola miditra amin'ny varotra ary hampihena ny 5% amin'ny vola azo vokarena ho toy ny saram-pifandraisanay. 95% ny vola azo avy amin'ny varotra (95K $) hafindra ao amin'ny kaontinao.
Ohatra, raha mividy / mampiasa vola $ 10,000,000 ianao dia hiverina 95% amin'ny $ 10M, izay $ 9.5M amin'ny endrika fidiram-bola vaovao amin'ny alàlan'ny WTE. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, WTE dia hanampy anao hamokatra $ 10M amin'ny vola miditra amin'ny varotra ary hampihena ny 5% amin'ny vola azo vokarena ho toy ny saram-pifandraisanay. 95% ny vola azo avy amin'ny varotra nateraka ho anao dia hafindra any amin'ny kaontinao. Ity no fomba ahazoanao vola 95% ho an'ny orinasanao isaky ny fividianana ataonao amin'ny alàlan'ny WTE.
Na ny fandanianao isam-bolana dia $ 10M, $ 100M, $ 10B, na mihoatra isam-bolana, tsy maninona izany.
Azo antoka 100% hahazo 95% cashback isaky ny fividianana ataonao amin'ny 'Card Credit Business Back Cash' amin'ny alàlan'ny WTE.
Tsindrio ny FAMINTINANA NY FOMBA FANAMPINY!